E buliri ugwu Jehova elu (1-5)
Ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè (4)
A ga-eweda ndị dị mpako ala n’ụbọchị Jehova (6-22)
2 Ihe a ka Aịzaya nwa Emọz hụrụ n’ọhụụ gbasara Juda na Jeruselem:+ 2 N’oge ikpeazụ,Ugwu nke ụlọ Jehova dị n’elu yaGa-akwụsi ike n’ebe dị elu karịa ugwu ukwu niile.+ A ga-ebulikwa ya ka ọ dị elu karịa ugwu nta niile. Mba niile ga-enurukwa na-agbago na ya.+ 3 Ọtụtụ ndị ga-ejekwa, sị: “Bịanụ ka anyị gbagoo n’ugwu Jehova,Gbagookwa n’ụlọ Chineke Jekọb.+ Ọ ga-akụziri anyị ụzọ ya. Anyị ga-ejekwa ije n’ụzọ ya.”+ N’ihi na a ga-esi na Zayọn nye iwu,*Sikwa na Jeruselem kwuo ihe Jehova kwuru.+ 4 Ọ ga-ekpere mba dị iche iche ikpe,Doziekwara ọtụtụ ndị okwu ha. Ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè,Kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ mma e ji akwa osisi.+ Mba agaghị eweli mma agha lụso mba ọzọ agha. Ha agaghịkwa amụ otú e si alụ agha.+ 5 Ndị ezinụlọ Jekọb, bịanụKa anyị jee ije n’ìhè Jehova.+ 6 Chineke, ị hapụla ndị gị, bụ́ ndị ezinụlọ Jekọb,+N’ihi na ha emewela ọtụtụ ihe a na-eme n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Ha na-eme anwansi*+ ka ndị Filistia. Ha na ụmụ ndị ala ọzọ bikwa. 7 Ọlaọcha na ọlaedo juru eju n’obodo ha. Akụ̀ ha anaghịkwa agwụ agwụ. Ịnyịnya juru eju n’obodo ha. Ụgbọ ịnyịnya ha bụkwa agụta agụta.+ 8 Chi dị iche iche na-abaghị uru juru n’obodo ha.+ Ihe ha na-akpọrọ isiala bụ ihe ha ji aka ha rụọ,Ya bụ, ihe mkpịsị aka ha rụrụ. 9 Otú a ka ha si eweda onwe ha ala, na-emenyekwa onwe ha ihere. Ị gaghịkwa agbaghara ha. 10 Banyenụ n’ọgba nkume, zookwanụ n’ájáN’ihi na ike Jehova na-emenye ụjọ. Ọ dị ebube, bụrụkwa onye ukwu.+ 11 A ga-eme ka ndị dị mpako dị ala. A ga-ewedakwa ndị dị elu ala. Ọ bụ naanị Jehova ka a ga-ebuli elu n’ụbọchị ahụ. 12 N’ihi na ọ bụ ụbọchị Jehova nke ụsụụ ndị agha.+ Ọ ga-abịa n’ihi ndị niile dị mpako na ndị na-ebuli onwe ha elu. Ọ ga-abịakwa n’ihi mmadụ niile, ma onye ukwu ma onye nta.+ 13 Ọ ga-abịa n’ihi osisi sida niile dị na Lebanọn, ma ndị nke dị elu ma ndị nke e buliri elu. Ọ ga-abịakwa n’ihi osisi ook niile dị na Beshan. 14 Ụbọchị ahụ ga-abịakwa n’ihi ugwu ukwu niile dị eluNa ugwu nta niile dị elu. 15 Ọ ga-abịakwa n’ihi ụlọ nche niile dị elu, nakwa n’ihi mgbidi niile a rụsiri ike. 16 Ọ ga-abịakwa n’ihi ụgbọ mmiri niile na-aga Tashish+Nakwa n’ihi ụgbọ epeepe niile mara ezigbo mma. 17 A ga-eme ka ndị dị mpako dị ala. A ga-ewedakwa ndị dị elu ala. Ọ bụ naanị Jehova ka a ga-ebuli elu n’ụbọchị ahụ. 18 A gaghị ahụkwa chi dị iche iche na-abaghị uru.+ 19 Mgbe Jehova ga-ebili mee ka ụwa maa jijiji,Ndị mmadụ ga-abanye n’ọgba nkume,Banyekwa n’ime ọnụ ndị dị n’ala,+N’ihi na ike ya na-emenye ụjọ. Ọ dị ebube, bụrụkwa onye ukwu.+ 20 N’ụbọchị ahụ, ndị mmadụ ga-atụfusị chi ha dị iche iche na-abaghị uru, ma ndị e ji ọlaọcha mee ma ndị e ji ọlaedo mee,Ndị ha meere onwe ha ka ha na-akpọrọ isiala. Ha ga-atụpụrụ ha nkapị na ụsụ,+ 21 Ka ha nwee ike banye n’oghere ndị dị n’oké nkumeNakwa n’ebe ndị gbawara agbawa ná nnukwu nkume,Mgbe Jehova ga-ebili mee ka ụwa maa jijiji,N’ihi na ike ya na-emenye ụjọ. Ọ dị ebube, bụrụkwa onye ukwu. 22 Maka ọdịmma unu, unu atụkwasịzila mmadụ nkịtị obi,Onye naanị ihe ji ya ndụ bụ ume ọ na-eku.* Gịnị mere a ga-eji jiri ya kpọrọ ihe?
^ Ma ọ bụ “kwuo ihe a ga-eme.”
^ Ma ọ bụ “Onye na-eji imi ya eku ume.”